Arxan-darane maanta lagu toogtay magaalada Baydhabo | KEYDMEDIA ENGLISH
Arxan-darane maanta lagu toogtay magaalada Baydhabo
Ninkii watay Bajaajta qaadday Aamino ee geyay guriga lagu dilay ayaa sheegay halkii ugu war dambeysay, taasoo fududeysay in lagu guuleystay ka gun-gaaridda kiiskaan oo la helo meydka, lana soo qabto dilaaga arxanka daran ee Maxamed Xasan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Maxamed Xasan Maxamed oo si arxan darro ah u dilay Allaha u naxariistee, Aamino Maxamuud Malaaq Isxaaq, ayaa maanta lagu toogtay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, kadib markii Maxakamadi ku xukuntay dil toogasho.
Maxamed Xasan, ayaa maxakamadda ka hor qirtay inuu gacantiisa ku dilay, Aamino Maxamuud, oo deyn ku lahayd, kadibna uu ku riday boosaneerka musqusha gurigiisa, halkaas oo labo maalin ka hor laga soo saaray meydka marxuumadda.
Sida ay sheegeen booliska ka howl-gaa Baydhabo, Maxamed wuxuu Aamino ku war galiyay in uusan gudi karin deynta ay ku leedahay, hayeeshee uu ku wareejinayo furaha kurigiisa si ay u iibiso ama ugu celiso lacagata dheeraadka ka ah deynta ay ku lahayd.
“Markii ay ugu timid gurigiisa ayuu dilay, kadibna wuxuu ku riday boosanneerka Suuliga, sidaas ayaana mudo maalmo ah lagu waysanaa meydka Marxuumad Aamino, ka hor inta aan halkaas laga soo saaro Axaddii”, ayaa lagu yiri war ka soo baxay boliska.
Ugu danbeyn fagaare ku yaalla magaalada Baydhaba oo ay xaadir ku ahaayeen boqollaal shacab ah, ayaa lagu toogtay Maxamed Xasan Maxamed, kaasoo Makaxamadda gobolka Bay ka hor qirtay inuu dilay Aamino Maxamuud Malaaq Isxaaq.